Jereo tsara ny famolavolana | Famoronana an-tserasera
Mamolavola fijery tsara amin'ny famolavolana
Mampivelatra a mijery tsara ny famolavolanaTsy maintsy mitsikera ianao, mamakafaka ary mamantatra endrika tsara, satria eto amin'ity faritra ity dia tsy hita isa ny endrika hita isan'andro.
Ankehitriny, tototry ny baomba ny olona karazana endrika maro izay aseho amin'ny sehatra samihafa, amin'ny karazana endrika, loko ary fandrefesana mety, na izany aza, tsy ny zava-drehetra no lasa mahafinaritra. Izany no antony hiresahantsika amin'ity lahatsoratra ity momba ny sasany paikady mamela hamolavola fijery tsara momba ny endrika.
1 Paikady amin'ny famolavolana fijery tsara amin'ny famolavolana
1.1 Mitadiava aingam-panahy sy tsikera
1.2 Ampiharo ny endrika, rehefa mandinika ianao
Paikady amin'ny famolavolana fijery tsara amin'ny famolavolana
maro paikady izay afaka manampy anao hanana endrika tsara amin'ny famolavolana dia:
Mitadiava aingam-panahy sy tsikera
Manaova fampirimana amin'ny solosaina findainao ary tahirizo izay rehetra manome aingam-panahy anao mandritra ny herinandro. Avy eo mamaky ny fampirimana ary manontania tena momba ireto hevitra ireto:
Satria inona no mahaliana anao amin'izany famolavolana izany?
Inona no atao hoe famolavolana, inona no fiantraikany aminao?
Inona no tsapanao amin'izany famolavolana izany?
Ahoana no hanatsaranao azy?
Ireo fanontaniana ireo no lakilen'ny famakafakana ary mieritreritra ao ambadiky ny fisehosehoana, izay no nahatonga ny mpamorona hampivelatra ny sary, sary, endrika sns ..., tsy ilaina ny hamalianao ny fanontaniana tsirairay, na dia zava-dehibe ny hitahirizanao azy ireo ao an-tsainao ary mamelombelona azy ireo.
Manana fanontaniana momba ny toerana hitadiavana referansy ve ianao? Raha tsy fantatrao aiza no ahitana referansa, misy tranokala maromaro manolotra fanavaozana matetika, toy ny tranokala Dribbble, InspirationGrid, Behance ary Awwwards, mety amin'ny karazana tetikasa samihafa.
Ny famakafakana ny kilasy referansa tsirairay hita, dia mety hiteraka fa iray ihany ny fijerinao.
Avela hahita ny tsirairay amin'ireo sokajy zavakanto misy ary tanterahina Manerana an'izao tontolo izao, na inona na inona isehoan'izy ireo amin'ny magazine, afisy sy boky dia aza ferana amin'ny Internet irery ny tenanao. Afaka mitady ny arabe mihitsy aza ianao amin'ny fijerena ny manodidina anao isaky ny mandao ny trano ianao. Mianatra ny mandinika!
Ampiharo ny endrika, rehefa mandinika ianao
Betsaka ny fanazaran-tena mamela mampiofana mijery tsara ny famolavolanaOhatra, azonao atao ny mandany minitra vitsy hijerena sy hiezahana hahatakatra ny tontolo manodidina anao. Mitovy, azonao jerena ve ireo trano? ny zavatra hitanao eny amin'ny arabe, famantarana, natiora sns ...
Rehefa mampiasa an'izao tontolo izao sy izay rehetra manodidina anao ho fitaovana hampivelarana ny masonao dia tsy maintsy dinihinao ireto lafiny ireto:
Fantaro izay manintona ny sainao sy ny antony maninona no misy, satria ny famolavolana dia momba ny fiheverana voalohany fotsiny.
Ahoana ny fifandraisanao amin'ny endrika manodidina anao?
Inona avy ireo loko ampiasaina ary ahoana no fiarahan'izy ireo miasa?
Misy fiovana ve ny endrika? Fa maninona
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Mamolavola fijery tsara amin'ny famolavolana